ओलीले बृद्दाभत्ता खारेज गर्छुभनेपछी देउबाले भने उपचारको १७ करोड पनि फिर्ता गर्नुहोस – PostKathmandu
January 27, 2018 by PostKathmandu
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले सरकारका पछिल्ला कामकारबाहीप्रति आपत्ति जनाउँदै अस्वीकार गर्ने भएको छ । बिहीबार एमाले मुख्यालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कामचलाउ भैसकेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राज्यशक्ति, राज्यका श्रोत साधनको व्यापक दुरुपयोग गरेको भन्दै सरकारका कामकारवाही प्रति कडा आपत्ति जनाएको हो । उसले सरकारले धमाधम गरेका नियुक्ति, सरुवा बढुवा र निर्णयहरु अनुचित भन्दै राज्कोषको दुरुपयोगमा मात्रै सरकारको ध्यान गएकोे बताएको हो । एमालेले संविधान, कानुन र संघीयताको मर्मविपरित गरेका कामलाई अव बन्ने सरकारले पुनर्विचार गर्ने समेत प्रष्ट पारेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाफ दिँदै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देउवा सरकारले संविधानको गलत व्याख्या गरेर, जालझेल गर्दै तथा अनुपयुक्त सेटिङ र गलत मनसायबाट अलोकतान्त्रिक मनसायबाट सरकारमा बसिरहेको बताए । ‘जालझेल, षड्यन्त्र र तिक्डम गर्न, आर्थिक संकटमा देशलाई फसाउने, सञ्चित रकम सक्न सरकार लागेको छ, सरकारले यतिबेला बजेट पेश गरेको हो वा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको ? के प्रयोजनले सरकारलाई बृद्धभत्ताको उमेर घटाउनु पर्यो ?,’ ओलीको प्रश्न थियो । देउवा सरकारको ६५ बर्षकालाई बृद्ध भत्ता दिने निर्णय अलोकतान्त्रिक भन्दै उनले देशलाई आर्थिक संकटमा फसाउँने षड्यन्त्र भएको बताए । एमालेको निर्णय सुनेपछी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले झोक्किदै भने एमालेले त्यस्तो भन्ने हो भने केपिओलीको उपचारमा खर्च भएको राज्यको १७ करोडभन्दा बढी रकम राज्यलाई फिर्ता गरोस्onlinetamangkhabar.in
७० रुपैयाँ मै काठमाडौंमा थपीथपी मासुभात, जहाँ खाना लाइन बस्नु पर्छ।
काठमाडौंमा थपीथपी मासुभात, जहाँ खाना लाइन बस्नु पर्छ। (फोटो सहित)
झट्ट सुन्दा पत्यार नलाग्न सक्छ, तर यो सत्य हो कि, काठमाडौं उपत्यकामै ७० रुपैयाँ थपीथपी खाना खान पाइन्छ । त्यो पनि ललितपुरको पाटनढोका नजिकैको ललित भोजनालयमा ।यहाँ खाना खाने समयमा लाइन नै लाग्नु पर्छ । किनकि, सस्तो भएका कारण यहाँको खानाको गुणस्तर पनि कम छैन । खाने ठाउँ सफा नै छ । सादा खानको मूल्य ७० रुपैयाँ भए पनि मासुको झोल ‘कम्प्लिमेन्ट’ पाइन्छ ।
यहाँ खाना खान विद्यार्थी र व्यवसायीदेखि सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु पनि छन् । कुमार तामाङले नौ वर्षदेखि यहाँ यो भोजनालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनी आफ्नो व्यवसायबाट सन्तुष्ट छन् । सुरुवाती दिनमा उनको भोजनालयमा ४० रुपैयाँमा खाना पाइथ्यो ।आज बजारमुल्य हेर्ने हो भने उनको खानाको मुल्य खासै महँगो छैन । यसकारण पनि उनको भोजनालयमा खाना खान आउनहरुको संख्या बढी नै रहेको छ । भन्छन्, ‘राम्रो गर्ने हो भने मान्छेको मन पनि जित्न सकिँदोरहेछ, आम्दानी पनि हुनेरहेछ ।
’उनले थप्दै भने,‘कम मुल्यमा खाना खुवाएर धेरैभन्दा धेरै मानिसहरुलाई सुविधा दिने काम हामीले गरिरहेका छौ ।’ ललित भोजनालयमा एकपटक खाना खाएकाहरुले अर्को पटक अन्यत्र जान चाहँदैनन् । यो भोजनालय पाटनढोकाबाट शंखमूल जाने सडकको दाइनेतिर छ ।
source :- onlinewavetv
Prevकण्डम किन्न लाज मानेपछि प्लाष्टिकको झोला प्रयोग गर्दा आत्थुआत्थु ! अस्पताल भर्ना भए जोडी
Nextमहिलाहरु रातमा गर्न चाहन्छन् यस्तो काम ! हरेक पुरुषले जान्नु पर्ने